टर्की - दुई महाद्वीपको जंक्शन मा एक देश | सबैका लागि उपयोगी जानकारी
यो टर्कीमा छ कि अरारात पर्वत स्थित छ, बाइबल अनुसार नूहको सन्दूक गाडिएको छ।
यो यहाँ छ कि टाइग्रिस र यूफ्रेटिसको उत्पत्ति यसको जरा हो, जुन पुरानो मेसोपोटामियाको सभ्यता फस्टायो।
टर्की - आधारभूत जानकारी
मुद्रा: टर्की लीरा (TRY)
आजको टर्कीमा ट्रोई थियो जुन शहर होमरको इलियडमा वर्णन गरिएको थियो। यो जहाँ प्रसिद्ध हेलेना ट्रोजन आए। यसबाहेक, होमर आफैं पनि अन्टाल्याबाट आएका थिए जस्तो कि पौराणिक राजा मिडास वा इतिहासकार हेरोडोटस।
युरोप र एशियाको चौबाटोमा यसको स्थान शताब्दीयौंदेखि टर्कीलाई एक उपयोगी भूराजनीतिक स्थितिमा राखेको छ। टर्कीले अब मध्य पूर्वमा बढ्दो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै छ।
टर्की भित्र छ subtropical समुद्री मौसम क्षेत्र तट र उप-उष्णदेशीय महाद्वीप अन्तर्देशीयमा। दक्षिण र पश्चिमका तटीय क्षेत्रहरू यसको भूमध्य विविधताको उप-उष्णकटिबन्धीय जलवायुबाट प्रभावित छन्। टर्कीको उत्तरी तटमा त्यहाँ स्थानीय कालो समुद्रको मौसम छ जुन उपोष्णकटिबन्धीय भन्दा हल्का छ।
टर्की कहिले आराम गर्ने?
भूमध्य सागर र एजियन समुद्री यात्रा गर्न उत्तम समय मेदेखि अक्टुबर हो। तापक्रम २ 25 डिग्री भन्दा तल झर्दैन। यो उत्तम छ कालो समुद्रमा जुन - सेप्टेम्बरमा।
टर्कीमा वसन्त र शरद तातो र घमाइलो छ, जुन बाहिरी गतिविधिहरू र दर्शनीय स्थलहरूको लागि राम्रो समय हो।
के प्रभावशाली छ र टर्की जाने कहाँ छ?
इस्तानबुल दुई महाद्वीप र दुई सभ्यताहरू, यूरोपियन र मध्य पूर्वीको संगममा अवस्थित शहर हो। यूरोप र एशिया बॉसफोरस ब्रिजले जोडेका छन्।
इस्तांबुल तीन महान साम्राज्यहरूको राजधानी थियो: रोमन, बाइजान्टिन र ओटोम्यान।
तपाईं ग्रीक र रोमन दरबारका अवशेषहरू र विश्वको सब भन्दा सुन्दर मस्जिदहरू, ब्लू मस्जिदको यसको विशेषता छ मीनाराटहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ बाइजान्टिन क्याथेड्रलहरू र हागिया सोफिया जस्ता उल्लेखनीय चर्चहरू पनि छन् जुन इतिहासमा रूढीवादी चर्च, एक मुस्लिम मस्जिद, कन्स्टान्टिनोपलको ग्रीक क्याथेड्रल, र रोमन क्याथोलिक गिरजाघरको रूपमा रहेको छ। हाल, Hiaia सोफिया एक संग्रहालय हो।
टर्कीमा हुँदा तपाई चारवटा समुद्री छनौट गर्न सक्नुहुन्छ: कालो, एजियन, मारमारा वा भूमध्यसागर। पर्यटकहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय एजियन र भूमध्यसागर हो, सामूहिक रूपमा टर्की रिभिएरा भनेर चिनिन्छ।
यो क्यापडोसियामा जानको लायक छ, ज्वालामुखी टफ्स द्वारा बनाईएको एक रमणीय काल्पनिक चन्द्र परिदृश्य। शताब्दियौंदेखि घरहरू, गिर्जाघरहरू र दरबारहरू टफबाट कुँदिएका थिए, जुन तपाईं आजसम्म प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पैदल वा बाइकमा क्यापडोसिया अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ, र तातो एयर बेलुन गन्डोलाको साथ हावाबाट अचम्मको चट्टान संरचनाहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ।
संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय टर्की डिश शाश्लिक हो। यो जान्न लायकको छ कि टर्कीमा "शाश्लिक" भन्ने शब्दले धेरै नै बिभिन्न मासुका भाँडालाई बुझाउँदछ। कबाबको अर्थ ग्रील्ड मासु वा किन्मालेको मासुबाट बनेको इन्टौंन्टल कटलट्स मात्र नभएर क्यासरोल वा बाक्लो सूप पनि हुन सक्दछ।
मासु वा तरकारीको भाँडामा थप अतिरिक्त चामलहरू हुन्छन्, प्रायः मसला र तरकारीहरू, वा थोरै बुल्गुर दलियाको साथ।
पिउनका लागि कडा, मीठो चिया टकसाल र मसलाको साथ परेको छ, जबकि आर्यन एक प्रकारको नुन मिल्क ड्रिंक हो।
टर्कीमा धम्की र समस्याहरू
टर्क धेरै पर्यटक मैत्री छन् र टर्की एक सुरक्षित देश मानिन्छ। त्यहाँ चोरी र पर्यटकहरूलाई धोका दिने प्रयासहरू छन्, तर सामान्य सावधानीहरू पर्याप्त छन्।
यो याद गर्नु पर्दछ कि टर्की कुर्दहरूसँग द्वन्द्वमा छ। २०१२ को ग्रीष्म otherतुमा, सिरियाको अवस्थाका कारण द्वन्द्व झनै तीव्र भयो र हक्कारी प्रान्तको गजानटिएप शहरमा आतंकवादी हमला र विस्फोटन भयो।
टर्की धर्मनिरपेक्ष देश हो, तर तुर्कहरू, मुस्लिम भएकोले पश्चिमी-विरोधी अशान्तिमा भाग लिन सक्दछन्, साथै अन्य मुस्लिम देशका बासिन्दाहरू पनि जान्छन्, त्यसैले जानु भन्दा पहिले यो कुरा जान्न योग्य छ कि विदेश मन्त्रालयले तुर्की जानु अघि चेतावनी दिन्छ वा वा एक निश्चित अवधिमा एक विशिष्ट क्षेत्र।
टर्की, अक्टोबरमा आराम: समीक्षा
उत्तम स्नोर्कलिंग स्पटहरू
टर्की - इस्तानबुल: शहरको सामान्य विवरण
कोटे डी एजुर, टर्की, इजिप्ट
साइप्रस, लिमासोल: समीक्षा
58 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,553 प्रश्नहरू।